In baahida maalinlaha ah, aan u isticmaalno badan oo files iyo u baahan tahay inaad si ammaan ah ku kaydi. In si kale loo dhigo, waxa aanu u baahan tahay in gurmad for our faylasha loo baahan yahay ee warbaahinta iyo document files of qaabab kala duwan. Sidaas darteed, dadka isticmaala Mac inta badan waa in search of ugu fiican codsiyada DVD gaare si ay u dhawrto ay gurmad by DVDs gubanaya. Sidaas, halkan ayaa la isku dayay in uu ku qor soo baxay 10-dejiyeyaasha DVD ugu fiican ee aad u dooran aan.
Wondershare DVD Creator for Mac Yimaado leh guryaha si ay uga soo DVD tayo sare leh xawaare oo dab ka ololayo dhakhso. Waxa si fudud la tartami karin kuwa kale ee ku DVD la bedeley ay ugu diro daafaca DVD iyo qalabka danabka ah ee DVD dadka isticmaala Mac gubanaya.
Burns faylasha caanka ah videos in DVD ka Mac OS rakibay PC.
Taageerada 3 DVD formats- folder DVD, files ISO iyo DVD disc.
Waxay bixisaa si ay u gubaan DVDs la files kale ee warbaahinta sida audio iyo sanamyadii.
Waxaad ku dari kartaa files audio iyo jeeda cajiib ah in aad DVDs slideshow image.
Kuu ogolaanayaa inaad xaalkaa ku bedeley DVD template iyo videos sida aad door bidayso.
Interface mid aad u fudud in ay fahmaan oo ay isticmaalaan.
Tani waa xidhmo ka mid ah sida ImgBurn for Windows iyo bixisaa waayo-aragnimada gaare DVD fiican in dadka isticmaala Mac.
Awood aad u gubi dhan qaabab file warbaahinta in DVD.
Waxaad heli kartaa ugu bedeley DVD isku mid ah DVD-yada ganacsiga.
The interface user sahlan si aad u hesho waayo aragnimo raaxo leh.
BurnX waa super software kale DVD gubi la mid ah Wondershare DVD Creator for Mac ah. Waa codsiga il furan, waayo, DVD-yada kale ee aan ahayn Guba gubanaya.
Waxa ugu fudud oo user saaxiibtinimo interface.
Ma jiro xad u qaabab file oo caan ah si ay u gubaan DVD.
Bedeley DVD Interactive iyo muuqaalada qabow ku gubanayso raaxo leh.
LiquidCD kaa caawinaysaa in aad u gubi DVD in habka ugu fudud oo bixiyaa qaababka kuwa is-hoosaysiiya, waayo, gubasho oo dhan files warbaahinta.
Taageerada oo dhan files warbaahinta si ay u gubaan DVD.
Waxay bixisaa taageero kala duwan af-u Users Mac.
Page taageero ama forum waa la heli karaa.
A qaabab wax soo saarka boosaska badan waxaa laga heli karaa si ay u qanciso baahidaada.
5. Express Gubashada
Gubashada Express waxay bixisaa furan il software ugu wanaagsan ee user wax Mac u gubanaya DVD-ka wax qaabab file warbaahinta.
Burns CD audio, DVD Blu-ray iyo files ISO aad faylasha loo baahdo.
Waxay bixisaa DVD guba super-degdeg ah iyo tayada.
Si fudud u jiidi oo hoos u dhigi kara geedi socodka ku gubanayso.
The user saaxiibtinimo interface waa si fudud.
SimplyBurns waa codsi kale oo weyn u isticmaala Mac si aad u hesho files ay muhiim gubo DVDs iyo sameeyo gurmad ah ammaan iyo kalsooni.
Kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan kala duwan ee files warbaahinta in DVD.
Waxaa marna masixi karin DVD-rewritable.
Waxay bixisaa fudayd ugu isticmaalka interface.
7. Disk gubi u Mac
User saaxiibtinimo interface ay gubaan DVD.
Dhammaan files warbaahinta la gubo oo kartaa in DVD saarka files.
Waxaa DVDs la gubo ka files image aad Mac PC ku shaqeeya ka heli kartaa.
Waxaa ka furan kartaa CD oo ma taageersana in Mac OS.
SVCD iyo VCD la gubo oo karo by codsigan.
The safafka balaadhan oo ah qaabab file baa lagu gubi karo DVD.
Qaar ka mid ah muuqaalada qabow in ka badan gubashada waxaa laga heli karaa.
iDVD loo isticmaalo in ay codsiga default u Mac OS ah. Waa software ugu wanaagsan ee la heli karo ee Mac ay gubaan videos aad QuickTime oo dhan qaabab file warbaahinta kale ee audio, image iyo document files. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo saaray tan iyo Mac OS X Mavericks. Laakiin weli waxaad ka heli kartaa hab lagu rakibi in aad Mac.
Gubasho warbaahinta files kala duwan si ay DVDs samaynta playable in ciyaartoyda DVD commercials.
Waxa aad ka heli kartaa duubey image ka, cajalladaha xogta iyo CD cod ah.
Goobaha video dooxeen iyo beerista Qaar ka mid ah sidoo kale la heli karaa.
Sofware ayaa utility ugu muhiimsan iyo preinstalled in aad bixisaa adeegyada kasta dukaanka oo warbaahinta la xiriira waa Lugood. Waxaa inta badan loo isticmaalo ee abaabulka files warbaahinta iyo aad u hesho guryaha telefoonka iyo dukaan u Apple isticmaala qalab. Laakiin waxaa ka heli kartaa in aad la gubo files warbaahinta in DVD. Waxaad ka heli kartaa habka ay gubaan DVD ah ka halkan (http://m.wikihow.com/Create-a-DVD-in-iTunes).
Interface ugu isticmaalo, iyo ugu fudud in ay ka shaqeeyaan.
Waxaa gubi karaa files warbaahinta in DVD.
Waxaad samayn kartaa duubey aad images xusuus.
Waxay bixisaa si ay u maareeyaan files warbaahinta iyo iibsiga barnaamijyadooda, ciyaaraha iyo files warbaahinta kale.
Lugood Radio, bandhigyada TV sidoo kale waxaa laga heli karaa.
iDVD AVI - Sida loo Beddelaan AVI in iDVD ama DVD ee Mac
Sida loo Guba DVD on OS X Mavericks
> Resource > Mac > Top 10 Rinjiga DVD Best u Mac